စာပေ - မှတ်စုစာအုပ်
စာပေဟူသည်မှာ လူသားမျိုးနွယ်စုတစ်ခုခုအတွင်း ချင်းချင်းကိုယ်နှုတ်အမူအယာများဖြင့်ပြောဆိုဆက်သွယ်ခဲ့ကြသည်တို့ကိုလည်းကောင်း၊ စိတ်ကူးစိတ်သန်းအတွေးအခေါ်ခံစားချက်စသည်တို့ကိုလည်းကောင်း၊ လွယ်ကူစွာပျောက်ကွယ်မသွားစေခြင်းအလို့ငှာ တိကျစွာသတ်မှတ်ထားသော သင်္ကေတစာလုံးများအဖြစ် ရေးခြစ်မှတ်တမ်းပြုထားခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါစနစ်တကျရေးခြစ်ထားသောသင်္ကေတများကို နည်းမှန်လမ်းမှန်ပြန်လည်ဖတ်ရှုတတ်သူတိုင်းအတွက် ရေးသားခဲ့သူ၏ အနက်ရင်းကို မြင်သိနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ဖတ်ရှုသူတို့၏ တတ်သိကျွမ်းကျင်မှုအပေါ်မူတည်ကာ ကွယ်ဝှက်ငုပ်လျှိုးနေသော အနက်အဓိပ္ပါယ်များ ရှင်းလင်းလမ်းညွှန်မှုများ ရသများစသည်တို့ကိုပင် ရရှိနိုင်သည်။ မြန်မာတို့အတွက် ရှေးယခင်က ထိုသို့ရေးသားမှတ်တမ်းပြုစုခြင်း ရေးစပ်ဖွဲ့သီခြင်းတို့ကို ပေရွက်ပေါ်တွင် ကညစ်တန်ဖြင့်ရေးခြစ်သုံးစွဲခဲ့ကြရခြင်းဖြစ်လေရာ မှတ်တမ်းအစုအဝေးများကို ပေစာထုပ်များ၊ ပုရပိုဒ်များစသည်ဖြင့် ခေါ်ဝေါ်လေ့ရှိကြပြီး စာပေရေးသားပြုစုခြင်း ဟူသောအတတ်ပညာဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းဆောင်တာအမျိုးအစားတစ်ခုအဖြစ်ပေါ်ထွန်းလာခဲ့သည်။ (မှတ်တမ်းအဖြစ်မှသည် အသုံးဝင်အသုံးတည့်မှုရှိသောကြောင့် နောင်ပြုလုပ်ရန် အစီအစဉ်ညွှန်ကြားချက်များ၊ အမိန့်ကြေညာချက်များ အသွင်ဖြင့်လည်းသုံးစွဲလာကြသည်)
စာပေအသွင်ကွဲများ စာပေကဏ္ဍနှင့် ပတ်သက်၍ လတ်တလော စတင်ဆောင်ရွက်ရန်လွယ်ကူသော စာပေပညာရှင်စာရင်း မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။ ခေတ်အလိုက် ပိုင်းပြီး သုတစာပေ၊ ရသစာပေစသည်ဖြင့် စာပေအမျိုးအစားအုပ်စုခွဲခြင်းတို့ ၀ိုင်းဝန်းပြုလုပ်ပေးကြပါရန်ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ လက်ရှိတွင် ခေတ်အဆက်ဆက် စာပေများကို ပုဂံခေတ် ၊ ပင်းယခေတ် ၊ အင်းဝခေတ် ၊ တောင်ငူခေတ် ၊ ညောင်ရမ်းခေတ် ၊ ကုန်းဘောင်ခေတ် ဟူ၍ ပိုင်းပြီး ပြုစုခဲ့သော စာဆိုတော်များ အတ္ထုပ္ပတ္တိ၊ မြန်မာစာပေသမိုင်းများတွင်အတော်အတန် ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ပါရှိပြီးဖြစ်သည်။ နောက်ပိုင်းဖြစ်ရပ်များသည် မလိခ၏ မြန်မာဝတ္ထုအညွှန်းတွင် အတော်တော် များများပြည့်စုံစွာရှာဖွေလေ့လာနိုင်ကြပါသည်၊ ဤနေရာတွင် လွတ်လပ်ရေးရပြီး နောက်ပိုင်း ကျော်ကြားခဲ့သော သုတ ရသ စာပေပညာများအား နှစ်အလိုက် ကြိုးစားပြုစု မှတ်တမ်းတင် သွားကြပါမည်။
ထိုစာပေကို ဖတ်ရသော အခါ ကိုယ်တိုင် တွေ.ကြုံ ရသကဲ.သို.လည်းကောင်း ၊ကိုယ်တိုင် ကြားရသကဲ.သို.လည်းကောင်း
အကြားအမြင် ဗဟုသုတ များစေသော စာပေကို သုတစာပေဟု ခေါ်ပါသည်။ထိုစာပေကိုဖတ်ရသောအခါ စာအရေးအသားပြောင်မြောက်သောကြောင်. ဖတ်သူမှာ ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ခံစားနေရသကဲ. သို. ကိုယ်တိုင် ဖြစ်ပျက်နေသကဲ.သို.ခံစားရသော စာပေများကိုဆိုလိုသည်။
ထိုစာပေကိုဖတ်ရသောအခါ စာအရေးအသားပြောင်မြောက်သောကြောင်. ဖတ်သူမှာ ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ခံစားနေရသကဲ. သို. ကိုယ်တိုင် ဖြစ်ပျက်နေသကဲ.သို.ခံစားရသော စာပေများကိုဆိုလိုသည်။